LA က Hawaii Supermarket | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » LA က Hawaii Supermarket
LA က Hawaii Supermarket
Posted by kai on Dec 15, 2010 in Community & Society, Food, Drink & Recipes | 11 comments
မြန်မာတွေအ၀ယ်များတဲ့ ဆူပါမားကက်တခုပေါ့..။ ပိုင်တာက တရုတ်-ဗီယက်နမ် လား..တရုတ်-ကမ္ဘောဒီယန်းလားပါပဲ..။
အဲဒီမှာ ငပိရည်ကြို၊ စိမ်းစားငပ၊ိငံပြာရည်ကစလို့.. အီကြာကွေး၊ ဒူးရင်းသီးအထိရှိပါတယ်..။
ကန်းစွန်းရွက်လည်းပုံထဲတွေ့မှာပေါ့..။ တပေါင် ၂.၂၉ဒေါ်လှတဲ့..။
အဲလိုပုံတွေကြည့်ချင်တာ … ဒီဘက်က ကွန်ဒင်ရှင်မကောင်းသေးတော့ အဲဒီဘက်ကများများတင်ပေးစေချင်ပါတယ်ကွာ်ွခြားတာလေးတွေ … မြင်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အတွေးချဲ့လို့ကောင်းတယ် …။
တောက်… ရပ်ကွက်ထဲက ကန်စွန်းခင်းတွေကို လိုက်ကောက်ပြီး LA ကို ကန်စွန်းရွက် export လုပ်ချင်တယ်… LA ရှိ Super Market များ ဆက်သွယ်ပါ။
အဲဒီ အရွက်တွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တင်ပို့လဲ.. ဒေသ စိုက်ပြီး ရောင်းတာ ဖြစ်ပုံမပေါ်ဘူး။ တင်ပို့ရင် ဘယ်လမ်းက လာတာလဲ။ ရေလမ်းလား ကုန်လမ်းလား လေလမ်းလား။ အရွက် လတ်ဆတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ လေကြောင်းနဲ့ မှ ဖြစ်မယ်။
ယူအက်စ်ကို များအထင်သေးလို့..။ ဒီမှာတင်အကုန်စိုက်တာဟေ့..။
တိုင်းပြည်ကကျယ်ကျယ်.. ရာသီမိုးလေ၀သက စုံစုံရှိလေတော့… မစိုက်လို့မရတာ မရှိသလောက်ပဲ.။
ခုဆို မြန်မာပိုင်ချဉ်ပေါင်ပင်တွေ စိုက်ခင်းတွေတောင်ရှိနေပြီ..။
အိန္ဒိယသားတွေက ..သူတို့စားတဲ့..ဒန့်ဒလွန်။. ဒညင်းသီး စိုက်တယ်..။ ကိုရီးယားက သူတို့ကြိုက်တဲ့..ဂျင်ဆင်းပင်စိုက်တယ်..။
အရင်ကတော့ .. တောင်ဖက်နိုင်ငံ မက်ဆီကိုက..အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တော်တော်များများသွင်းတယ်..။
ဆန်ရှင်(စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာ) မရှိရင် .. မြန်မာအသီးအနှံ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဒီကမြန်မာ-အမေရိကန်တွေရောင်းတာနဲ့တင် အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်..။
ခန့်မှန်းခြေ မြန်မာ-အမေရိကန်အိမ်ထောင်စု ၂သောင်း+ အိမ်တိုင်းလိုလို တလ ၂ခါ+လက်ဖက်စားတယ်။ ငပိစားတယ်။ င၇ုပ်သီးစားတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးစားတယ်.။ စားတယ်..သုံးတယ်..။
ဆိုတော့ ..လက်ဖက် တလ အထုတ် ၄သောင်း အသာလေးဝယ်ပေးနိုင်တယ်..။
တထုတ် .. ရောင်းဈေး ၅ဒေါ်လာ..ဆိုရငိပဲ.. လက်ဖက်တမျိုးထည်းကို ..လည်ပါတ်ငွေ ၂သိန်း+ရှိတယ်..။
လေးခိုင် ဒီပုံတွေကဖရီးရိုက်လို့ရတာလား ကျနော်တို့မြန်မာဆူပါမားကပ်တွေက အဲလိုပေးမရိုက်ဘူးဗျ ဂမုန်းပွင့် စိန်ဂေဟာ City mart, Super one ဓာတ်ပုံပေးမရုိက်ဘူး
အူးခိုင်ကတော့ တွက်တာကတော့ ဟုတ်နေတာဘဲ.. ပင်မ ပစ္စည်းတန်ဖိုး မရှိပေမဲ့ ခရီးစရိတ်ကြောင့် တက်သွားကြတာပါ။ မြန်မာ- အမေရိကန် ဆိုရင် လေကြောင်းက နေ လာလို့ ကတော့ စရိတ်တွေ အစမတန် တက်ကုန်မယ် ရေကြောင်းကနေ လာမယ် ဆိုရင် လည်း တန်ကြေးက ရှိတာဘဲ။ ကုန်သွယ်ရေးကတော့ ဆန်ရှင်မရှိရင် ကိုယ်ထက် လည်ပြီး လက်ဦးမဲ့ သူတွေ တပုံကြီး.. ဆန်ရှင်ကြားထဲမှာ တောင်မှ.. မသိအောင် လုပ်နေတဲ့ လူလည်တွေ အများကြီးရှိတယ်။
ချာတူးရေ သူတို့ပေးမရိုက်လည်း လစ်ရင်လစ်သလို ရိုက်လို့ရနေပါပြီကွာ ။
ကင်မရာကြီးတကားကားနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆဲခံရမှာပေါ့ … မသိမသာလေး ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ရင် ရတာပဲ ..။ ဟိုးတစ်လောက ရုံးမှာ နာမည်ကြီးတံဆိတ်နှုတ်ခမ်းနီတွေလာရောင်းတယ် ၀ယ်လိုက်ကြတာ ၀က်ဝက်ကွဲပဲ … ကြည့်တော့မှ အင်တွေဖြစ်နေတယ် …သိလို့ပြောလည်း ပြောတဲ့လူက ငပေါပဲ ..ဒါနဲ့စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတင်မိလိုက်သေးတယ် … အဲ့ဒီတုန်းက သူတို့ကို သက်သေပြချင်လို့ အဲ့ဒီနာမည်ကြီးအလှကုန်ရောင်းတဲ့ စိန်ဂေဟာကိုသွားပြီး …. မသိမသာ ခိုးရိုက်လာခဲ့သေးတယ် ။
ဘာမှလာပြောတာမရှိပါဘူး..။ ပါ့ဗလစ်နေရာမှာ မရိုက်ရသတိပေးဆိုင်း မရှိရင် ရိုက်လို့ရပါတယ်..။
ဒါက လွတ်လပ်ခွင့်ပဲလေ..။ ဒါတောင် မီဒိယာရဲ့ လက်မှတ်မပြသေးဘူး..။
စီးပွားဖြစ်တနေရာရာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့သူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းရတယ်..။
တနေရာရာပါလာပြီးမှ .. ဆိုင်ရာလူက တရားစွဲလိုက်ရင် ငွေလျှော်ရများလို့ ..။
ဒီအထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရပါဘူးလို့ပြောကြတာပဲဗျ Dagon Center မှာလဲရိုက်လို့ရမလား ခွင့်တောင်းတော့ရဘူးတဲ့လေဂျာ
ွှအလကားပါချာတူးရေ အဲ့ဒီ ဒဂုံစင်တာက အဲ့ဒီလိုပဲ။
သူတို့မှာ ပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေလုပ်နေတာပဲ .. ရိုက်လိုက်တာ တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ ကင်မရာမရိုက်ရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တောင် ပုံထဲပါသေးတယ် .. ရစ်ချင်ရင် ရစ်တယ် ။ ပေးရိုက်ချင်ရင်ရိုက်တယ် … ။ ဒီမှာ စင်တာအတော်များများက ရိုက်လို့မရဘူး …ဒါပေမဲ့လည်း လစ်ရင်လစ်သလို ဆော်တာပါပဲ ။
အော်.. ဟုတ်လား.. ဆူးက အဲဒီ တုန်းကလေ… ချာတူးလန် ပုံကို ကြည့်ပြီး ဒီကောင်လေး အကွက်ကောင်း သေချာ ရိုက်ပြီး ဗုံးထားခဲ့မဲ့ ရုပ်ဘဲ ဖြစ်ရမယ်ထင်လို့.. လက်မှတ်မထိုးပေးဘဲ ပြန်လွတ်လိုက်တာပါ။ နောက်တခါ ရိုက်ခွင့်ပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား တာဝန်အရမို့လို့ပါ။